चुम्बन पछाडिको रोचक वैज्ञानिक रहस्य ! - Nepal Page Nepal Page
चैत्र २०, २०७७ शुक्रबार
चुम्बन पछाडिको रोचक वैज्ञानिक रहस्य !
चुम्बनको पछाडि पनि एउटा विज्ञान लुकेको छ । वैज्ञानिकका अनुसार १० सेकेन्डको एउटा चुम्बनमा ८ करोड ब्याक्टेरिया एकआपसमा शेयर हुन्छन् । विज्ञान भन्छ, यसका कैयौं फाइदा छन् भने यसका नोक्सान पनि छन् ।
चुम्बनले यति धेरै ब्याक्टेरियाको आदान प्रदान भए पनि हात मिलाउँदा भने बिमारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । चुम्बनमा यति धेरै ब्याक्टेरिया आदान प्रदान भए पनि यो युगल जोडीका लागि फाइदाजनक नै छ । प्रेमको स्पर्श नै ओठबाट हुन्छ । बच्चा बेलामा आमाको दूध पिउँदा जसरी ओठको प्रयोग हुन्छ त्यो पनि चुम्बनसँग निकै मिल्दोजुल्दो हुन्छ ।यसले बच्चाको दिमागमा नसाको बाटो बनाउँछ जसले मनमा सकारात्मक भावना पैदा गर्छ ।
ओठ मानिसमा देखिने सबैभन्दा कामुकता जगाउने अंग हो । ओठमा अत्यधिक संवेदनशील नसा हुन्छन जसका कारण ओठमा छुने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा संकेत जाने गर्छ । र, यसले हामीमा सकारात्मक भावना उत्पन्न गर्छ । चुम्बनले हाम्रो दिमागको एउटा ठूलो हिस्सालाई सक्रिय बनाउँछ । यसले सक्रिय भएर काम गर्न थाल्छ । दिमागले अब के हुन्छ भन्ने सोच्न थाल्छ । यसका कारण हाम्रो शरीरको हार्मोन तथा न्यूरोट्रान्समिटर वृत्तमा घुम्न थाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो सोच तथा भावनामा प्रभाव पार्न थाल्छ ।
चुम्बनको समयमा जब दुई ओठ मिल्छ त्यसबेला ९ मिलिग्राम पानी, .७, मिलिग्राम प्रोटिन, .१८ मिलीग्राम अर्गानिक कम्पाउन्ड्स, .71 मिलिग्राम फरक किसिमका फ्याट तथा .45 मिलिग्राम सोडियम क्लोराइडको आदान प्रदान हुन्छ । चुम्बनले ‘क्यालोरी बर्न’ गर्ने काम पनि गर्छ । चुम्बन गर्ने जोडीले प्रतिमिनेट २ देखि २६ क्यालोरी खर्च गर्छन् । र, यो सुखद अनुभव गर्न ३० विभिन्न प्रकारका मांसपेशीको प्रयोग हुन्छ । सन् २०१५ मा भएको एउटा अध्ययन अनुसार १६८ संस्कृति मध्ये आधा भन्दा कम संस्कृतिमा मात्र ओठको चुम्बनलाई स्वीकार गरिएको छ । चुम्बनको इतिहास २००० वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ ।
सम्बन्ध बलियो बनाउन, तनाव कम गराउन तथा शरीरको ‘मेटाबोलिजम’ लाई बढाउन पनि चुम्बनलाई राम्रो मानिन्छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार २ सय २० जना कोरोना संक्रमित, काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ ८ वैशाख । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २ हजार २ सय २० जना कोरोना
रुसी खोपलाई नेपालमा प्रयोगको अनुमति, खरिद प्रक्रियाका लागि बाटो खुला
काठमाडौं ७ वैशाख । रुसी खोप स्पुतनिक भी लाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइएको छ
भारतमा थप २ लाख ५६ हजारमा संक्रमण : थप १७५७ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ, ७ बैशाख । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतमा तिव्र रुपमा फैलिदै
जापानी आणविक प्रदूषणमा पश्चिमी मिडियाको मौनता
समाचारमा आएअनुसार जापान सरकार फुकुसिमा आणविक ऊर्जा संयन्त्रको प्रदूषित पानीलाई प्रशान्त महासागरमा फाल्न ‘तयार छ’ ।
ओजीजी दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने बेइमानी नगर्नुस् : प्रदीप गिरि (संसदको सम्वोधन)
आज बडो असमन्जस्यमा म बोल्न उठेको छु । बोलूँ कठिन, नबोलूँ झन् कठिनको अवस्था छ
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५०० नाघ्यो
काठमाडौं ३० चैत । पछिल्लो २४ घण्टामा ५५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
दुई हप्तमा २७१ बालबालिकामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ ३० चैत — संसारभर कोरोना संक्रमणको दोस्रा लहर चलिरहेका बेला नेपालमा पनि संक्रमण बढिरहेको
पत्रकारको सङ्गठन चुनौती र सम्भावना
भर्खरै नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको तीनै तहका कार्यसमितिाका पदाधिकारीका लागि निर्वाचन सम्पन्न